Unicorn Flash, yemahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Unicorn Sparkle, yemahara kwenguva shoma
Zvekare ngatitaurei nezvekushandisa izvo kwenguva yakati rebei tinokwanisa kurodha pasi mahara zvachose uye izvo zvinobatsira vana vedu kutsauswa mukati memazuva eKisimusi aya. Unicorn Flash, ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye2,99 euros. Seizvo zita rinoratidzira, Unicorn Flash, mutambo umo vana vadiki vanofanirwa kugadzira yavo nyati. Kuti ugadzire yako unicorn iwe unogona kusarudza kubva kune akasiyana mavara, zvishongedzo uye zvitambi. Kana zvangogadzirwa, vadiki vanozokwanisa kupinda munyika dzemashiripiti, senge kune makore ane makore, sango remashiripiti nenyika inotapira.
Rwendo kuburikidza nepasi rose kuseri kweiyo nyoni richava rizere nekushamisa kunoshamisa uko kwaizofanirwa kutsvedza pamwe nemuraraungu kuti usvike kuimba yemashiripiti. Nekuda kweichi chishandiso, haina kuitirwa chete kufadza vedu vadiki, vadiki vanozokwanisa kudzidza kuverenga manhamba kubva pa1 kusvika pa20 mumitauro yakasiyana, sezvo ichi chishandiso chiripo muchiSpanish, chiGerman, ChiChinese chakareruka, Chinyakare chiChinese, chiKorea, chiFrench, chiRungu, chiItari, chiJapanese, chiDutch, chiPolish, chiPutukezi, chiRussian, chiSwedish, chiThai neTurkey, vachikwanisa kuchinjanisa navo mumamiriro emutambo. .
Zvimiro zve Unicorn Flash
Unicorn Sparkle ndiyo yekutanga 3D inomhanya mutambo yakagadzirirwa kunyanya kune vana vadiki.
Mwana wako anogona kugadzira unicorn yake, achisarudza kubva pane akasiyana mavara, zvishongedzo uye zvitambi.
Mutambo une mana anoshamisa nyika, izere nemashiripiti uye kushamisika
Nerubatsiro rweiyo Unicorn, mwana wako anodzidza iwo manhamba kubva pa1 kusvika 20 nenzira inonakidza.
Iyo app inofuridzirwa neUunicornio Flash, iyo-yakatengwa-bhodhi mutambo kubva kukambani yekutamba HABA.
Unicorn Flash inoda ingangoita iOS 7.0 kana gare gare. Inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch uye inoitirwa vana vanosvika makore mashanu.
Unicorn Flash4,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Unicorn Sparkle, yemahara kwenguva shoma
Swift Chishandiso 3.1 Kuuya Chitubu 2017
Zvinoenderana neB & H, iyo BeatsX inogona kusasvika kusvika rinotevera gore